အစိုင်အခဲသစ်သားပရိဘောဂများထုတ်လုပ်ခြင်း, Goodwin ပရိဘောဂ
Modest ဇိမ်ခံကားသည်အနုပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီး Time သည်စစ်မှန်သောခံစားချက်များကိုသက်သေထူသည်။
Modest Luxury သည်အနုပညာတစ်ခုဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားမြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးဖြင့်ကျေနပ်အောင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်တိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်သက်သောင့်သက်သာရှိပြီးယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိစေရန်သေချာစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ကောင်းမွန်သောဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်စျေးကွက်မှလျှောက်လွှာများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ၎င်းတို့တွင်လူကြိုက်များခြင်းနှင့်အသုံးချခြင်းကိုအာမခံသည့်အင်္ဂါရပ်များစွာရှိသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာဂန္ထဝင်သစ်သားဆိုဖာများ Goodwin GH59
နှလုံးသည်နေရာဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့အိပ်မက်အိမ်အတွက်ကောင်းမွန်ပြီးစျေးနှုန်းချိုသာပြီးထူးခြားဆန်းသစ်ပြီးရှေးဟောင်းဂန္ထဝင်သစ်သားဆိုဖာများကိုရွေးချယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏နာမည်ကြီးဂန္ထဝင်အမေရိကန်ပရိဘောဂထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါသည်။ Goodwin သည်သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ပိုပြီးဂန္ထဝင်သစ်သား sofainfo အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ဆက်သွယ်ရန်: Tess ဖုန်း: 0086-76923188817 သို့မဟုတ်မိုဘိုင်း: 0086-13925525570 ဝဘ်ဆိုက် www.goodwinfurniture.com
Goodwin GH55 factory ည့်ခန်းအတွက်ရှေးဟောင်းအနက်ရောင်ဆိုဖာများတရုတ်စက်ရုံဆိုဖာ
ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် the ည့်ခန်းအတွက်ရှေးဟောင်းအနက်ရောင်ဆိုဖာဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့်ဒီဇိုင်းအတွက်ကြိုးပမ်းရန်။ Goodwin ပရိဘောဂ၊ ဘဝ၏အနုပညာရှင်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏နာမည်ကြီးဂန္ထဝင်အမေရိကန်ပရိဘောဂထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါသည်။ Goodwin သည်သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ the ည့်ခန်းအချက်အလက်အတွက်ရှေးဟောင်းအနက်ရောင်ဆိုဖာများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ဆက်သွယ်ရန်: Tess ဖုန်း: 0086-76923188817 သို့မဟုတ်မိုဘိုင်း: 0086-13925525570 Website: www.goodwinfurniture.com
Goodwin ပရိဘောဂများသည်အကောင်းဆုံးရောင်းအားစျေးနှုန်းရှေးဟောင်းအဖြူရောင်စာအုပ်တင်ခ Wooden GH43
ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ပေါင်း 20 ကျော်ပူရောင်းဈေးရောင်းဈေးကြီးစာအုပ်များသစ်သားဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုနှစ်ပေါင်း 20 ကျော်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပိုကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့်ဒီဇိုင်းအတွက်ကြိုးစားရန်။ Goodwin ပရိဘောဂ, ဘဝ၏အနုပညာရှင်။ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိကျော်ကြားသောဂန္ထဝင်အမေရိကန်ပရိဘောဂထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ Goodwin သည်သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ပိုမိုကောင်းမွန်သောရောင်းဈေးစျေးနှုန်းရှေးဟောင်းအဖြူရောင်စာအုပ်တင်ခွင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ဆက်သွယ်ရန်: TessPhone: 0086-76923188817 သို့မဟုတ် Mobile: 0086-139255555570ဝဘ်ဆိုက်: www.goodwinfurniture.com
ဆိုက်ရောက်အသစ်၏ရှေးဟောင်းသားရေအိပ်ရာ၏ဗီလာစတိုင် | Goodwin GF01
အသစ်ရောက်ရှိလာသောရှေးခေတ်သားရေကုတင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီးအိပ်ခန်းများ၊ ဆိုဖာများ၊ ထမင်းစားပွဲများ၊ ကော်ဖီစားပွဲများ၊ စားပွဲများ၊ ကုလားထိုင်များ၊ အဆင့်မြင့်အရည်အသွေး၊ အထင်ကရဒီဇိုင်းများ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်နာမည်ကြီးသည့်ဂန္ထဝင်အမေရိကန်ပရိဘောဂထုတ်လုပ်သူများ ဖြစ်၍ Goodwin သည်သင်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ပိုမိုအသစ်သောရောက်ရှိမှုရှေးဟောင်းသားရေအိပ်ရာအချက်အလက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ဆက်သွယ်ရန်: Tess ဖုန်း: 0086-76923188817 သို့မဟုတ်မိုဘိုင်း: 0086-13925525570 Website: www.goodwinfurniture.com
၁။ Inquiry - ဖောက်သည်များသည်လိုချင်သောပုံစံ၊ စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်များ၊ သက်တမ်းနှင့်လိုက်နာမှုလိုအပ်ချက်များကိုပြောပြသည်။
၂။ ဒီဇိုင်း - ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီစေရန်အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းထုတ်ကုန်များကိုသေချာစေရန်စီမံချက်၏အစမှပါဝင်သည်။
၃။ အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု - အရည်အသွေးမြင့်မားသောတည်ဆောက်ပုံများကိုထောက်ပံ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိရောက်သောထိန်းသိမ်းမှုကိုထိန်းသိမ်းသည်& ထိရောက်သောအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်။
၄။ Mass Mass: ပုံစံ၊ လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ၀ ယ်လိုအားနှင့် ပတ်သက်၍ ပုံစံဒီဇိုင်းကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုသည်နောက်အဆင့်ဖြစ်သည်။
၅။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အော်ဒါများသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုစီစဉ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ intermodal ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အခြားပေးသွင်းသူများသို့မဟုတ်နှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းစပ်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏ထုတ်ကုန်လောကတွင်အပြည့်အ ၀ စွဲမြဲစွာရောက်နေသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ရုံကဏ္ sector ၏တိကျသောအင်္ဂါရပ်များစိမ်မ; ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ ၀ ယ်ယူသူများအားအဘယ်အရာကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသနည်း။ "ငါတို့သည်အဘယ်သို့စားသုံးသူရဲ့ဝယ်ယူမှုအလိုဆန္ဒဖြစ်ပေါ်?" ဒါကမင်းတို့နဲ့မင်းလုပ်မှာပါ။ ဤအရာသည်သင်၏စီမံကိန်းကိုကျွန်ုပ်တို့စီမံကိန်းသို့မည်သို့ပြောင်းလဲစေသနည်း။
ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးဖောက်သည်များထံမှမကြာသေးမီကစစ်မှန်သောတုံ့ပြန်ချက်များ။ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ပေါင်း 20 ပရိဘောဂတင်ပို့မှုအတွေ့အကြုံရှိသောတရုတ်နိုင်ငံမှအမေရိကန်စတိုင်ခိုင်ခံ့သောသစ်သားပရိဘောဂပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်သာလွန်ကောင်းမွန်သော0န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ဖောက်သည်အတော်များများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှပရိဘောဂများကို0ယ်ယူကြပြီး၎င်းတို့သည်ဗွီဒီယိုတုံ့ပြန်ချက်များအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိဘောဂများကိုနှစ်သက်ကြသည်။ပိုမိုကောင်းမွန်သောသစ်သားပရိဘောဂများကိုကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ဆက်သွယ်ရန်: TessPhone: 0086-76923188817 သို့မဟုတ် Mobile: 0086-139255555570ဝဘ်ဆိုက်: www.goodwinfurniture.com
Feedback ပေးကမ်းသူကို Goodwin လက်ကား0လိုင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ client မှ Real Video နှင့် Feedback ။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိဘောဂများကိုအလွန်နှစ်သက်သည်။စိတ်ကြိုက်ပရိဘောဂများ၏ဒီဇိုင်းကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ပိုမိုကောင်းမွန်သောသစ်သားပရိဘောဂများကိုကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ဆက်သွယ်ရန်: TessPhone: 0086-76923188817 သို့မဟုတ် Mobile: 0086-139255555570ဝဘ်ဆိုက်: www.goodwinfurniture.com
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏ပြပွဲခန်းမ0ရပ်ထဲရှိပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကော်ဖီစားပွဲ
သင်၏ (living ည့်ခန်း, အိပ်ခန်း / ထမင်းစားခန်း / စသည်တို့) အတွက်ကောင်းမွန်သောလက္ကားအစိုင်အခဲသစ်သားပရိဘောဂများကိုရွေးချယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွဲပြားသောဒီဇိုင်းများမှရွေးချယ်ပြီးသင်၏အခန်းဒီဇိုင်းကိုထည့်ပါ။ အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ပါ။ပိုမို. လက်ကားအစိုင်အခဲသစ်သားပရိဘောဂအချက်အလက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ဆက်သွယ်ရန်: TessPhone: 0086-76923188817 သို့မဟုတ် Mobile: 0086-139255555570
Goodwin ပရိဘောဂများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏0န်ဆောင်မှုခံယူသူများ၏စက်ရုံတွင်အကောင်းဆုံး Wa184 ထမင်းစားပွဲများ
Goodwin ပရိဘောဂများသည်သစ်သားသစ်သားထမင်းစားခန်းကိုတရုတ်မှပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်း 20 ပရိဘောဂတင်ပို့မှုအတွေ့အကြုံ။ အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်သာလွန်ကောင်းမွန်သော0န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျော်ကြားသောဂန္ထဝင်အမေရိကန်ပရိဘောဂထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရှိတရုတ်နိုင်ငံရှိ Goodwin သည်သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။သစ်သားထမင်းစားခန်းသတ်မှတ်ချက်များပိုမိုများပြားလာရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ဆက်သွယ်ရန်: TessPhone: 0086-76923188817 သို့မဟုတ် Mobile: 0086-139255555570ဝဘ်ဆိုက်: www.goodwinfurniture.com
Dongguan Goodwin Furniture Co. , Ltd သည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံ၏ကျော်ကြားသောကုန်ထုတ်လုပ်မှုမြို့ဖြစ်သော Dongguan၊ Houjie တွင်တည်ရှိပြီး120ရိယာ ၁၂၀,၀၀၀ စတုရန်းမီတာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်မြင့်အမေရိကန်စတိုင်အစရှိသည့်သစ်သားပရိဘောဂများကိုအာရုံစိုက်ပြီးဟိုတယ် / အိမ်ပရိဘောဂများ၏ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းဝယ်မှုကိုအလေးထားသည်။
လတ်တလောတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၀ န်ထမ်း ၅၈၀ ကျော်ရှိပြီး၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု ၀ န်ထမ်း ၁၀၀ နီးပါးခန့်ရှိသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောလက်မှုပညာများကိုလိုက်စားခြင်းတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းအဖွဲ့နှင့်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ကျွမ်းကျင်သောပရိဘောဂထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Sheraton, Shangri-La၊ InterContinental, Marriott, Ritz Carlton စသည့်နာမည်ကြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။ ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုကမ္ဘာအနှံ့ရောင်းချကြသည်။ , ဘူလ်ဂေးရီးယား, ပြင်သစ်, ဒူဘိုင်းနှင့်အခြားနိုင်ငံများ။ ဖောက်သည်အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးနှင့်ကျေနပ်မှုရှိသည်။
Goodwin ပရိဘောဂသည်လူများအားအရည်အသွေးမြင့်ပရိဘောဂများနှင့်ကြော့ရှင်းသောဘ ၀ ကိုထောက်ပံ့ပေးရန် ရည်ရွယ်၍ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအယူအဆကိုလိုက်နာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့်စတိုင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုန်သည်များအားလုံးကိုနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည်။